"El Ciabotìn", indlu ejwayelekile yezintaba - I-Airbnb
"El Ciabotìn", indlu ejwayelekile yezintaba
Montemale di Cuneo, Piemonte, i-Italy
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Graziella
Isanda kulungiswa, yasakazwa phezu kwezitezi ezimbili. Phansi kukhona ikhishi elihlonyelwe, i-TV, isitofu se-pellet, umbhede usofa (owodwa nohhafu onethezekile), igumbi lokugezela elineshawa.Isitezi sokuqala kungenwa ngezitebhisi ezivunguzayo zangaphakathi noma izitebhisi zamatshe zangaphandle. Nali igumbi lokulala eline-panoramic balcony.
Eduze nomnyango kunendawo yangasese enetafula lamatshe. Indawo yokupaka egcekeni, igaraji elincane elivaliwe lamabhayisikili noma izithuthuthu, indawo yokupaka mahhala yomphakathi eqhele ngamamitha ambalwa.
I-"El ciabotìn" yindlu enhle encane esezintabeni ebheke isigodi esingezansi nasezintabeni ze-Alps. Ekuqaleni kwekhulu leminyaka elidlule yayisetshenziswa njengesikole samabanga aphansi sezingane zendawo.
Ilungele njengendawo yokuphumula kodwa futhi yalabo abathanda ezemidlalo, ikakhulukazi ukuhamba ngezinyawo, ukugibela ibhayisekili nokuqwala (ijimu ehlonyelwe esigodini). Kunemizila eminingi emakiwe yohambo lwezinhlobo ezahlukene kanye namazinga obunzima.
I-Montemale iyidolobhana elincane futhi eliphilayo lapho kubonakala sengathi isikhathi sesimile. Idolobhana libuswa yinqaba yenkathi ephakathi.
Emamitha ambalwa ukusuka endlini, kune-trattoria ekhangayo (ngesicelo sokupheka imikhiqizo ejwayelekile yasePiedmontese neyendawo) futhi, ngokuphambene, ibha / imakethe encane.
Ngiyatholakala ukuze ngamukele izivakashi uma zithanda kodwa ngesaziso esincane ngenxa yezizathu zebhizinisi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Montemale di Cuneo namaphethelo